Itaosy : Zandary tsy nanaiky nandray kolikoly -
AccueilSongandinaItaosy : Zandary tsy nanaiky nandray kolikoly
Itaosy : Zandary tsy nanaiky nandray kolikoly
04/01/2018 admintriatra Songandina 0
Azo tsapain-tanana ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Tahaka ity nitranga teny amin’ny borigadin’ny zandary etsy Itaosy ity, dia tena ohatra velona azo tahafin’ny zandary rehetra mihitsy. Tonga nandrabiraby lelavola 190 000 Ariary , tao amin’ny “Commandant de Brigade” Itaosy ny lehilahy iray ny alin’ny 31 desambra 2017 teo, saingy avy hatrany dia niantso vavolombelona iray ity CB ity hanatrika ny resaka sy ny fandavany izany kolikoly mivantana izany.
Naverina nisaina sy noraisina avokoa ny laharan’ireo vola ireo mba ho porofo.
Talohan’io datin’ny faran’ny taona io dia nisy lehilahy iray tratran’ny zandary tamina raharaha fanafihana mitam-piadiana, fitazonana sy fivarotana zava-mahadomelina teny an-toerana. Tonga nitady ny CB avy hatrany anefa ny rain’io lehilahy tra-tehaka io, ka avy hatrany dia nandrabiraby an’io lelavola voalaza etsy ambony io. “ Nangataka fihaonana tamin’io tompon’andraikitra io izy ireo mba hamotsorana ilay zanany voatazona hatao famotorana”, araka ny fanazavana.
Tsy nanaiky kolikoly moa ny CB Itaosy, ary avy hatrany dia natolotra ny Fampanoavana ny raharaha. Notanana am-ponja vonjimaika avokoa izy mianaka ireo ary eny Antanimora no miandry ny fotoam-pitsarana azy. Ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena moa dia manentana ny zandary rehetra mba hanao tahaka ity fihetsika nasehon’ny CB Itaosy ity, satria dia mendri-piderana amin’ny ady amin’ny kolikoly, izay ady efa atrehin’ny zandary ihany koa.